यी बलिउड स्टार हुन् जो सरोगेसी मार्फत मातापिता बने ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी बलिउड स्टार हुन् जो सरोगेसी मार्फत मातापिता बने !
असोज ६ । बलिउड अभिनेत्री लीजा रे जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा बनेकी छन् । ४६ वर्षकी रे ले सरोगेसी मार्फत आमाको शुख प्राप्त गरेकी हुन् । आमा बनेको झण्डै तीन महिनापछि उनले यो जानकारी इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
जोन अब्राहमसँग चलचित्र वाटर मा काम गरेकी रे लाई सन् २००९ मा ब्लड क्यान्सर भएको थियो । उनले सन् २०१० मा आफू क्यान्सर मुक्त भएको बताइन् तर उनी पूर्ण रुपले स्वस्थ भने भएकी थिइनन् ।
उनले सन् २०१३ मा व्यवसायी जेसन देहनीसँग विवाह गरिन् । लीजा र जेसन यो वर्षको जुनमा सरोगेसी मार्फत मातापिता बनेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस इमरान खान प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित, भोलि सपथग्रहण
लीजा रे मात्र त्यो बलिउड स्टार होइनन् जो सरोगेसी वा आइभिएफ मार्फत मातापिता बनेका छन् । यसरी सन्तान सुख प्राप्त गर्ने बलिउड स्टारको सूचिमा अरु पनि छन् ।
१- शाहरुख खान
बलिउडमा सरोगेसी मार्फत मातापिता बन्ने पहिलो स्टार हुन् शाहरुख खान र गौरी खान । शाहरुख र गौरीले आफ्नो तेस्रो सन्तान सरोगेसी मार्फत जन्माएका हुन् । उनीहरुले छोराको नाम अबराम राखेका छन् ।
२- आमिर खान
आमिर खानले आफ्नी दोस्रो श्रीमती किरण रावसँग मिलेर सरोगेसी मार्फत छोरा जन्माएका छन् । उनीहरुले छोराको नाम आजाद राखेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस कण्डमको विज्ञापनको कारण सन्नी लियोनी फेरी चर्चामा
३- सोहेल खान
सोहेल र सीमा खानका दुई छोरा छन् । उनीहरुका कान्छा छोरा सरोगेसी मार्फत जन्मिएका हुन् । पहिलो सन्तान भएको १० वर्षपछि उनीहरुले सरोगेसी मार्फत दोस्रो सन्तान जन्माएका हुन् ।
४- तुषार कपूर
अभिनेता तुषार कपूरले विवाह त गरेका छैनन् तर उनी एक सन्तानका पिता हुन् । उनी सरोगेसी मार्फत छोराको बुवा बनेका हुन् । उनी बलिउडका पहिलो एकल पिता हुन् । उनको निर्णयको धेरैले स्वागत गरेका थिए ।
५- करण जोहर
करण जोहर पनि सरोगेसी मार्फत दुई सन्तानको पिता बनेका छन् । उनीले गएको वर्षको मार्चमा आफू छोरा र छोरीको पिता बनेको जानकारी गराएका थिए ।
६-कृष्णा र कश्मीरा शाह
कमेडियन कृष्णा र कश्मीरा शाह पनि सरोगेसी मार्फत जुम्ल्याहा सन्तानका मातापिता बनेका हुन् ।
७- सनी लियोनी र ड्यानिएल वेबर
बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनी र उनका श्रीमान ड्यानिएल वेबरले गएको वर्ष निशा नाम गरेकी बालिकालाई एडप्ट्ड गरेका थिए । यस्तै उनीहरु यो वर्ष सरोगेसी मार्फत दुई छोराका मातापिता बनेका छन् । -देश सञ्चारबाट साभार
ट्याग्स: khan, sunny leone